Dino Rush inowanikwa kurodha mahara | IPhone nhau
Zvekare isu tinokuzivisa iwe nezve kunyorera kana mitambo iyo kwenguva yakati inozove yakasununguka kwenguva shoma. Izvi zvinopihwa zvinowanzo ganhurirwa munguva, saka zviri nani kurodha pasi nekukurumidza pasati papera kusimudzira. Nhasi kwaive kutendeuka kwemutambo, Dino Kumhanyisa mutambo wakafemerwa prehistory. Mumutambo isu ticha tora chinzvimbo chaLundy, diki diki diki diki uyo achangobva mukurumwa kubva muzai uye ane nzara. Tinofanira kubatsira Lundy kukwiza hupenyu hwake hutsva musango rakaomesesa remusango.
Kudzora mutambo kuri nyore, isu tinongofanirwa kubata pachiratidziro kuitira kuti Dundy anokwakuka pamusoro pezvipingamupinyi zvaanotarisana nazvo, angave ari matombo, zvikara, moto unopisa kana sandi. Mutambo uchienderera mberi, isu tinofanirwa kudya michero yakawanda kuti Dundy ararame uye awane mabhonasi ekumupa kugona kwakakosha. Mumutambo uyu tinofanirwa kuisa hunyanzvi hwedu uye kutsunga pakuedza kuti tirarame munzira yedu. Mutambo uyu unotipa zvisingaite giraidhi, yakanakisa Gameplay uye mukana wekudzosera uyu muropa uye unonakidza kutandara kwemhuri yese kasingaperi.
1 Dino Rush Zvimiro
2 Dino Rush ruzivo
Dino Rush Zvimiro
3 mutambo modes.
Vatatu vatsva vanonakidza kuvhura.
5 nyika dzakasiyana dzekuongorora.
Kubvumirana ne Game Center kuti ukwanise kutamba pane zvese iyo iPad uye iyo iPhone.
Yakagadzirirwa kumeso ekuratidzira.
Kunyangwe uine zvekutenga-mumutambo, Dino Rush inotibvumidza kunakidzwa nemutambo tisingafanirwe kudyara imwe euro Mukutenga kwe-mu-app iyo iyo inotipa, kutenga izvo mukutsinhana ne1,99 euros kuchatipa zviuru zviviri zvemari uye 2.000 mukutsinhana ne80.000 euros, sarudzo yakanaka kune vanonyanya kushaya tariro.
Dino Rush ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 18-05-2015
Compatibility: Inoda zvirinani iOS 5.0 kana gare gare. Izvo zvinoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Dino Rush inowanikwa kurodha mahara
Zvinoenderana nemufananidzo uyu, Siri achave aripo paMac